ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးမှာ ရှင်သန်ချင်ရင်.. အရာတချို့ကို လက်လွတ်ရဲရတယ် ~ ITmanHOME
14:26 knowledge No comments
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးမှာ ရှင်သန်ချင်ရင်.. အရာတချို့ကို လက်လွတ်ရဲရတယ်
ဘေးကလူတွေပြုမူတဲ့ သဘောထားကို ဇာချဲ့အငြိုးဖွဲ့စရာမလိုဘူး
အခုရပ်တန့်နေတဲ့နေရာကနေ သင် ခွာရပါမယ်။
တော်ထက်တဲ့လူက ဘယ်အရာကိုမဆို အကောင်းဘက်ကတွေးတောတယ်
သူ့ဘဝက အလိုလိုနေရင်း ပျော်ရွှင်နေတော့တယ်။
တုံးအတဲ့လူက ဘယ်အရာကိုမဆို အဆိုးဘက်ကနေ တွေးတောတယ်
... တွေးလေ စိတ်ညစ်လေ
နောက်ဆုံးတော့ သူ့ဘဝက စိတ်ရှုပ်စရာတွေနဲ့ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတော့တယ်။
လောကမှာ အရာအားလုံးက ကိုယ့်အတွေးထဲမှာပဲ
နတ်ပြည်ကို တွေးမလား! ငရဲပြည်ကို တွေးမလား!
တခြားလူလောက် ကိုယ်ဘာမှမကောင်းဘူးလို့ သင်ခံစားရတဲ့အခါ
မသိမ်ငယ်ပါနဲ့... သင်ဟာ သာမန်လူတစ်ယောက် ဆိုတာကိုပဲသတိရလိုက်ပါ။
ဒီလောကမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲ နာကျင်ဝမ်းနည်းနေတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့
... တကယ်တော့ တခြားလူတွေက သင့်ထက်ဟန်ဆောင်ကောင်းလို့ပါ။
အကူအညီမဲ့တဲ့အခါ သင် ငိုနိုင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ငိုပြီးရင်တော့ လန်းဆန်းတက်ကြွရမယ်
အရာအားလုံးကို ရှုံးသွားသည့်တိုင် ပြုံးရယ်တာကိုတော့ မရှုံးစေနဲ့....
Credit all of နိုင်းနိုင်းစနေ